केटि भने पछि हुरुक्कै हुने राजेन्द्र खड्गीको टिकेन पहिलो बिहे |
केटि भने पछि हुरुक्कै हुने राजेन्द्र खड्गीको टिकेन पहिलो बिहे
27 January, 2017 | Bhawana Pathak | 925 Views | comments
दुईपटक विवाह गरे धेरैसँग प्रेम गर्र्न भ्याएका राजेन्द्रले विवाह पनि दुई पटक गरेका छन् । पहिलो विवाह लामो समय नटिकेपछि उनले डिभोर्स गरेर दोस्रो विवाह गरेका थिए । उनका दुईवटै विवाह प्रेम विवाह हुन् ।
पहिलो विवाह नटिकेको कारणमा उनले भने, ‘जीवनमा मैलै शहरको केटी गाउँमा विवाह गरे लान नहुने रैछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ । शहरको रमझममा रमाएका उनीहरुले गाउँमा गएर खुशी भेट्न सक्दा रहेनछन् । त्यस माथि पनि मैलै त पाटनको केटी विवाह गरेको । त्यहाँ त महिनैपिच्छे फेस्टिभलहरु भईरहन्छन् । तर हाम्रो हैटौँडामा भने त्यस्तो हुँदैन । यहि कारण नै मेरो पहिलो विवाह नटिकेको जस्तो लाग्छ मलाई ।
शुरु शुरुमा त नयाँ बुहारी हुन्छ नयाँ श्रीमती, नयाँ श्रीमान् हुन्छ । घर परिवारको मायामा सबै कुराहरु भुल्न सक्छन् । तर पछि पछि उनीहरुको जीवन शैली नै भिन्दैै भएको हुन्छ । छोरा छोरी पाउँछन् अनि माईत जाने ७, ८ महिना बस्ने गर्छन् । अनि उनीहरुलाई गाउँ फर्कन मन नलाग्ने हुँदो रहेछ । मेरो पहिलो विवाहमा यहि भएको हो । यसबाट मैलै सिकेको कुरा काठमाण्डौको केटी विवाह गरेर गाउँमा लग्यो भने कि केटीेले केटालाई काठमाण्डौ ल्याएर आउँछे । कि उसलाई छाडिदिन्छे ।’ उनको पहिलो विवाह पनि दिदीकी नन्दसँग नै भएको थियो ।
विवाह भन्दा पहिले १० जनासँग प्रेम
राजेन्द्र केटी भनेपछि हुरुक्कै हुने पुरुषमा पर्छन् । विवाह गर्नु भन्दा पहिले ‘९, १० वटा जति गरेको उनि आफै बताउछन ।’ हेटौँडाका उनी पहिले त्यहाँ बाबु राजाका नामले परिचित थिए । उनी सानै देखि नै डन थिए । उनलाई यो बलियो छ भनेर धेरै केटीहरुले मन पराउँदा रहेछन् । ‘केटीहरुले कि त सिम्पललाई मन पराउँछन् कि त तगडालाई । मलाई तगडा छ भनेर मन पराउँथे’, उनले भने । स्कुले जीवनमा उनले एकैपटक तीन जना केटीसरुँग प्रेम गरेका थिए रे ।
तर कलेज आएपछि भने प्रेमको स्वाद खासै नचाखेको बताए । विवाह भन्दा पहिले ९, १० जनासँग प्रेम गरेको छु भन्ने राजेन्द्रलाई हामीले तपाईँका पहिलेका प्रेमहरु थाहा पाउँदा भाउजुले के भन्नु हुन्छ ? कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? भनेर सोध्यौँ । यसको जवाफमा उनले भने, ‘केही पनि हुँदैन उसको त । तपाईँ मेरो भाग्यमा हुनुुहुन्थ्यो त्यहि भएर मैलै पाएँ मात्रै भन्छे । ’ तर अहिले आएर रविनाले राजेन्द्रलाई केटीहरुबाट टाढै बस्न भने बारम्बार सुझाव दिन्छिन् ।
#केटि भने पछि हुरुक्कै हुने राजेन्द्र खड्गीको टिकेन पहिलो बिहे